विश्वकप- तेस्रो स्थानका लागि आज ७ः ४५ बजे बेल्जियम र इंग्ल्याण्ड भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ? - Namaste Times
शनिबार, साउन ०४, २०७६ | Saturday, July 14, 2018
विश्वकप- तेस्रो स्थानका लागि आज ७ः ४५ बजे बेल्जियम र इंग्ल्याण्ड भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ३०, २०७५ समय: १७:१९:३३
काठमाडौं – रुसमा जारी फिफा विश्वकप २०१८ अन्तरगत शनिबार (आज) तेस्रो स्थानको लागि इंग्ल्याण्ड र बेल्जियमबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यी दुईको खेल नेपाली समय अनुसार ७ः ४५ बजे हुनेछ ।
क्रेस्टोभस्काई स्टेडियममा आज इंग्ल्याण्ड र बेल्जियम तेस्रो स्थानको लागि भिड्दा यो खेल फाईनल जतिनै रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ । इंग्ल्ण्याड २८ वर्ष पछि तेस्रो स्थानको लागि भिड्न लाग्दा बेल्जियम ३२ वर्ष पछि तेस्रो स्थानको लागि भिड्दैछ । इंग्ल्याण्डले सन् १९९० मा तेस्रो स्थानको लागि खेल्दा बेल्जियमले १९८६ मा तेस्रो स्थानको लागि खेलेको थियो ।
इंग्ल्याण्ड सेमिफाईनलमा क्रोएसियासंग दुई एक गोलले पराजित भएको थियो भने बेल्जियम फ्रान्ससग एक गोलले पराजित भएको थियो । बेल्जियम सेमिफाईनल खेल्दा सम्म रुमेलु लुकाकु, ईडेन हजार्ड, केभिन डि ब्रुने महत्वपूर्ण खेलाडी बनेका छन् । उता इंग्ल्याण्डको टिममा सवै खेलाडी बलियो र भरपर्दा छन् । मोर्डन फुटबललाई पछ्याउने टिम मानिन्छ इंग्ल्याण्डलाई ।
उता गोल्डेन जेनेरेशनको ट्याग पाएको बेल्जियम युरोपियन पावरहावउको रुपमा उदाएको टिम हो । हेड टु हेडका आधारमा यी दुवै टिमको एक अर्कासग २२ पटक भेट भएको छ । जस्मा १५ पटक इंल्याण्ण्डले जितेको छ ।
जारी विश्वकपमा नै यी दुईबीच प्रतिष्पर्धा हुन लागेको यो दोस्रो पटक हो । यस अघि समूह चरणको अन्तिम खेलमा बेल्जियमले इंग्ल्याण्डलाई १ – ० ले हराएर समूह विजेता बन्दा इंग्ल्याण्ड उपविजेता पनि प्रिक्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको हो ।
इंग्ल्याण्डका कप्तान ह्यारी केन जारी विश्वकपको गोल्डेन बुट दावेदार हुन् भने उनलाई वेल्जियमका रुमेलू लुकाकुले पनि टक्कर दिन सक्ने सभ्भावना केहि प्रतिशत भनेपनि रहेको छ । इंग्ल्याण्डले सन् १९६६ मा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो । विश्वकपको फाईनल खेल भने आईतबार क्रोएसिया र फ्रान्सबीच हुदैछ ।